Iindaba-Ukuhlelwa kunye neempawu zomatshini wemaski
Umatshini womzimba opheleleyo wokuzenzekelayo, kubandakanya ukondla, uhlobo lweplastikhi yohlobo lwe-aluminium yokufaka / ukuhluba, ukukhetha indawo, ifusion ye-ultrasonic, ukusika njalo njalo, imveliso iphezulu kakhulu, inokuvelisa iziqwenga eziyi-1-200 ngomzuzu. Umgaqo ophambili wokuguqula isantya samandla unokukhawuleza okanye ucothe. Iimaski ezahlukeneyo zinokuveliswa kusetyenziswa izinto ezahlukeneyo. Iimveliso zinamacandelo amabini okanye amathathu, kwaye umgangatho wemveliso uzinzile, umsebenzi ulungile, ingxolo iphantsi, kwaye indawo yomgangatho incinci. Izinto esebenzayo: spunbonded filament non-ephothiweyo ilaphu, 16-30g / m2, ezilungele processing iimaski ezilahlwayo.
Hot yokubumba yokubumba: imaski izinto ekrwada (non-ephothiweyo ilaphu) kunye nohlobo ngokucinezela eshushu (imilo ikomityi). 1. Kubandakanya isenzo sokubuya esizenzekelayo kunye nesakhelo sokondla; 2. Ukwenza into enye yemaski ngalo lonke ixesha.
Slice: esetyenziselwa ukwenza umaleko wangaphandle (umaleko okhuselayo) wemaski yendebe. Izinto ezizodwa zentsimbi zentsimbi zisetyenziselwa ukwenza ivili leentyatyambo. Ikhaba linxibile kwaye linobomi obude benkonzo. Uhlengahlengiso lohlobo olusisiseko oluguquguqukayo lubhetyebhetye, inqanaba elikhawulezayo neliphezulu. Sebenzisa i-wave ye-ultrasonic kunye nokuqhubekeka kweevili zentsimbi ezikhethekileyo, umda welaphu awuyi konakaliswa, akukho mfuneko yokuphamba kwangaphambili xa kusenziwa imveliso ngaphandle kwe-burr, kwaye ingaqhutywa ngokuqhubekayo
Isiphathi esingenanto: cinezela ngaphakathi nangaphandle kwemaski
Ukucheba: sebenzisa ukunyathela kwomoya ukusika umda ongaphezulu kwemaski.
Ukunyibilikisa ivalve yokuphefumla: I-welding yokuphefumla ivelufa
Indawo Welding: 130mm
Ukukhawuleza: 20-30 / min
Isakhiwo esidibeneyo somzimba womatshini samkela ulawulo lokwahlulwa kokhuseleko; ulawulo lwekhompyuter olukrelekrele lunokufezekisa ukuchaneka kwewaka lesibini lomzuzwana; uhlengahlengiso lomgangatho wokubumba, imoto ye-fuselage inyuka ngokuzenzekelayo kwaye yehle, kunye nolungelelwaniso olusisiseko oluthe tyaba.
Indlebe band indawo welding umatshini: isantya: 8-12 iziqwenga / min. Ingasetyenziselwa ukuwelda inqwelomoya, ibhanti lendlebe yangaphakathi / ibhanti yendlebe engaphandle, imaski esemgangathweni, uhlobo lomlomo wedada kunye nezinye iimaski ezimile okhethekileyo. Emva kokuba umzimba wemaski wenziwe, ibhendi yendlebe nge welding ngesandla
I-ultrasonic yangaphakathi ye-band band mask isebenzisa umatshini we-ultrasonic welding. Xa imaski isiwa kwindawo yokulungisa, i-wave ye-ultrasonic iya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Ukungcangcazela kwe-amplitude encinci kunye nokuhamba rhoqo kuya kwenziwa kwibhanti yendlebe, kwaye iya kuguqulwa ibe bubushushu kwangoko. Izinto eziza kulungiswa ziya kunyibilika, kwaye ibhendi yendlebe iya kuncanyathiselwa ngokusisigxina okanye ibethelelwe kwicala elingaphakathi lomzimba womaski. Yinkqubo yokulungisa imveliso yemaski yangaphakathi yeebhendi yendlebe, efuna kuphela umqhubi omnye.Umzimba wemaski ubekwe kwimicu yediski ngesiqwenga, kwaye inyathelo elilandelayo liqhutywa ngokuzenzekelayo sisixhobo de kugqitywe imveliso.
Inkqubo yokusebenza: (umzimba womaski) ukondla ngesandla → ibhanti indlebe ukondla oluzenzekelayo → i-ultrasonic band band welding → ukondla ilaphu elingasuswanga ukondla kunye nokusonga → I-ultrasonic side band welding → ukusika ibhanti esecaleni → ukugqitywa kwemveliso → ukubala → Ukugqitywa kwemveliso kugqityiwe → Ukuhambisa ngesixhobo sebhanti yokuhambisa
Umatshini wokugoba wokugoba, okwaziwa ngokuba ngumatshini we-C-type mask, ngumatshini ozenzekelayo ngokupheleleyo ekuveliseni umzimba wokugoba. Isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukubopha umaleko we-3-5 wamalaphu e-PP angalukwanga, icarbon esebenzayo kunye nezinto zokucoca ulwelo, kwaye isika umzimba wokugoba wokugoba, onokuqhubekisa i-3m9001, 9002 kunye neminye imizimba yemaski. Ngokwezixhobo ezahlukeneyo ekrwada ezisetyenzisiweyo, iimaski ezivelisiweyo zinokuhlangabezana nemigangatho eyahlukeneyo enje ngeffp1, FFP2, N95, njl. Umtya weendlebe yi-elastic yelinen engalukanga, eyenza iindlebe zowayisebenzisayo zikhululeke kwaye zingabinangcinezelo. Uluhlu lwelaphu lokucoca ulwelo lwesigqubuthelo lunefuthe lokucoca ulunge, elilingana kakuhle nemilo yobuso baseAsia, kwaye linokusetyenziselwa ulwakhiwo, imigodi kunye namanye amashishini angcoliseko oluphezulu.
Imisebenzi kunye neempawu:
1. Inokuqhubekisa i-3m9001, 9002 kunye nenye imask yokugoba, enokugqitywa ngaxeshanye.
Oluzenzekelayo Full cuke idada umlomo umatshini (idada umlomo imaski umatshini wokuvelisa) na umatshini leyo ukuvelisa idada umlomo isigqubuthelo kushishino ungcoliseko eliphezulu ngokusebenzisa umgaqo-cuke welding ingenamthungo. 4-10 maleko yelaphu non-ephothiweyo ilaphu kunye nezinto zokucoca ulwelo (ezinjengokunyibilika ilaphu evuthelweyo, izinto zecarbon ezisebenzayo, njl) inokusetyenziswa emzimbeni wesigqubuthelo somatshini, ukuvelisa iimveliso ezigqityiweyo zamanqanaba ohluzo lokucoca njenge-N95, i-FFP2, njl. Kwaye lo matshini uneqondo eliphezulu lokuzenzekelayo, ukusuka ekutyiseni ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo kungumsebenzi wokuzenzekelayo: izinto ezityiwayo ezondlayo, inkqubo yokuhambisa umgca wempumlo ezimeleyo, kwaye unokusonga umgca wempumlo ngokuzenzekelayo Ilaphu, ukusonga oluzenzekelayo kunye nokusika imveliso egqityiweyo, kwaye unokongeza ngokuzenzekelayo umngxuma wokuphefumla wevalve. Imveliso eveliswe ngumatshini womdaka womlomo wedada unembonakalo entle, ukusebenza okuzinzileyo, isivuno esikhulu, inqanaba lesiphene esisezantsi kunye nokusebenza ngokulula.
Iimpawu zediskbill mask umatshini:
1、 Inkqubo lokondla oluzenzekelayo
2、 Inkqubo yokusonga
3、 Inkqubo ye-Ultrasonic yokutywina ubushushu
4、 Umatshini wonke unentsebenzo ezinzileyo, isantya semveliso esilungelelanisiweyo, ukusebenza kwemveliso ephezulu, ukuya kuthi ga kwiziqwenga ezingama-60 ngomzuzu, ukubala okufanelekileyo nangokuchanekileyo, inqanaba lokusetyenziswa okuphezulu kwezinto eziluhlaza, ukusebenza ngokulula nangokufanelekileyo kunye nohlengahlengiso, inqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo, kunye nokuncitshiswa okusebenzayo Iindleko zabasebenzi.
ithumbu nokubotshwa umatshini, non elukiweyo ubuso imaski ukwenza umatshini, umatshini wobuso bomaski, umatshini wokwenza imaski, umatshini wokwenza imaski engalukanga, oomatshini ubuso ukwenza imaski,